I-Van based Franchise - Izitolo ezithengiswayo | Franchiseek
I-Van based Franchise
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»I-Van based Franchise
Okukhonjisiwe kwe-Van based Franchise
I-Van Van Franchise yakamuva
I-coffee Blue Franchise
Ithuba elihlukile le-Franchise ne-Coffee Blue! Ibhizinisi Lekhofi iBlue lenzelwe kusuka emhlabathini ukuze libe yiselula ehamba phambili ...
Ngubani i-Haulage Franchise I-Haulage Franchise yasungulwa ngenhloso yokushintsha imboni yezokuthutha. Nge ...
Ngabe ufuna ithuba lokuqala ibhizinisi lakho, kepha ukhathazeke ngokungena kokungaziwa ...
Ngomkhakha wokulethwa wokuchuma lokhu kungahle kuphakamise manje ukuthi kube isikhathi sokutshala ithuba elisekelweni le-franchise. Futhi sizokwabelana ngamaphuzu athile ukukhombisa inkambiso ephelele mayelana nezinsizakalo zokulethwa kwezidingo kanye nokwanda okumangazayo komkhuba wamakhasimende eminyakeni edlule kubantu abahanjiswa ngemikhiqizo yabo.
Umkhuba wamakhasimende uyashintsha
Izikhathi zamakhasimende angena ezitolo eminyakeni embalwa ezayo zizokhombisa ukwehla okukhulu futhi ngizofaka amaphuzu athile nezibalo eziqoqwe embonini yokulethwa eminyakeni yamuva nje ukukhombisa ukuthi umkhuba wamakhasimende uwonke ulubonisa kanjani ushintsho olukhulu eminyakeni embalwa ezayo ukwenza i-van based franchise imodeli yebhizinisi ezinzile.
Umkhakha Wokwethula Ukudla: Sonke siyazi ngesinye isikhathi kuhle futhi kulula kakhulu uku-oda okuthatha indawo futhi sikulethe ikakhulukazi lapho ukhathele ngoba kwenza usuku lwakho lube lula. Kepha bewazi ukuthi kukhuphuke malini eminyakeni edlule?
Vele udle e-UK kuphela ngonyaka we-2018 okwenziwe amakhilogremu amaRandi ayizigidi ezingama-779.5.
Ukuthengiswa kokulethwa kwasekhaya kwe-Dominos pizza okwenze ama- $ 1.2 billion e-UK emuva ngo-2018.
Umkhakha wokulethwa kokudla wawubiza u- $ 8.1 billion billion ngonyaka we-2018
Ngabe amaqiniso abonisani emakethe yokulethwa?
Sekukonke la maqiniso akhombisa ukuthi lesi simo siguquka kangakanani futhi lezi zibalo lapho ziqoqwe khona emuva ngonyaka we-2018. Okukhombisa ngokweqiniso amandla emakethe nokuthi yini ongakufeza kulezi zinsuku ngokutshala ithuba le-van based franchise. Futhi ungabona manje nabantu bezobuchwepheshe banamuhla bazivumelanisa nendlela entsha yokuphila. Ngakho-ke ukutshala imali kwi-franchise yokulethwa kuyindlela engcono kakhulu yokugxuma kulo mkhuba.